Dr. Patrick Young, Onye edemede na ntọala - peeji nke 2 nke 37
Nke a ga - abụ nyocha nke ukwu maka ebumnuche banyere ihe ọmụma n'ozuzu ya, abụghị nke a ga - esi eduzi. Nke a apụtaghị na m na-anabata ojiji ya ma ọ bụ nnabata. Steroids Ọtụtụ adịghị aghọta ma ọ bụ ghọtahiekarị- enwere ụdị steroid dị iche iche. Corticosteroids, nke nwere mmetụta ọjọọ karịa akụkụ Anabolic Steroid, n'ihi ihe ụfọdụ […]
1. Gini bu MK-677 (Ibutamoren)? MK-677 (Ibutamoren) ntụ ntụ (159752-10-0) bụ ihe omumu hormone ọhụrụ (GHS). Ihe omumu homonu nke uto bu ihe eji eme ya dika ulo akwukwo iji nye aka na abawanye uto hormone. Achọrọ homonụ nke uto ka ahụ gị rụọ ọrụ nke ọma. Nke a na - enyere gị aka ịkwalite akwara […]
Dabere na ihe nrịba ama nke anabolic Steroids Raws Mataki dabere na data azụmaahịa 10 afọ gara aga na ajụjụ dị iche iche, anyị chịkọtara 4 kasị ewu ewu anabolic steroids (AAS) maka labs ndị metụtara, ndị na-ere ahịa na ndị ahịa. Anyị emechiela akụrụngwa atọ kachasị elu nke ụlọ ọrụ. Maka ndepụta zuru ezu, lelee [...]